ဖားကန့်မြေစာပုံ ပြိုကျလို့သေဆုံးကြရသူတွေဟာ လောဘကြောင့် လို့ မှတ်ချက်ပေးတာ ကြားရတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်များက ထိုင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ သွား သတိရတယ်။ – H2Oupdatenews
ဖားကန့်မြေစာပုံ ပြိုကျလို့သေဆုံးကြရသူတွေဟာ လောဘကြောင့် လို့ မှတ်ချက်ပေးတာ ကြားရတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်များက ထိုင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ သွား သတိရတယ်။
oungmarine11@outlook.com 06/07/2020	1 Comment
ထိုင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဖြစ်ဖူးတာ ပန်းပဲထုတဲ့ တစ်ရွာလုံးဟာ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းသူတွေဖြစ်နေတယ်။
ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ပန်းပဲထုစားကြတဲ့ နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေမှာ ပညာတတ်လေးတွေ ပါလာတော့ အရောင်းမရှိတော့တဲ့ ကတ်ကြေး ကွမ်းညှပ် အစား သေနတ်အတုတွေ ပန်းပဲထုကြတာပဲ
လက်ရာလဲကောင်း အစစ်နဲ့မခြား အသုံးတည့်တယ်
ထိုင်းရော ဖိလစ်ပိုင်ပါ ငွေများ တရားနိုင် ရာဇဝတ်မှု့အင်မတန်များတယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်း လက်နက်ကောင်း ကောင်းမကိုင်ကြရပါ။
ရဲတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးတွေဟာ အဲ့ဒီရွာထွက် သေနတ်အတုတွေ ဝယ်ကိုင်ပြီး သူတို့ဟာ သူတို့ အလုပ်ဖြစ်နေတယ်။ မသမာသူတွေလဲ ဝယ်ကိုင်ကြတော့ လူသတ်မှု ဓါးပြမှု ရာဇဝတ်မှုတွေ များလာတယ်။
ကြာလာတော့ အစိုးရလဲ မနေနိုင်တော့ပဲ စစ်ဆင်ရေးလုပ်ပြီး ရွာကိုဝိုင်းတော့ တစ်ရွာလုံးအဖမ်းခံရတယ်..
ဒီကိစ္စမှာ ထိုင်းတို့ ဖိလစ်ပိုင်တို့ သုံးသပ်တာက ….
ရွာသားတွေရဲ့ ပန်းပဲထုခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးအလုပ်ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ခြား ဘာမှ မလုပ်တတ်ကြဖူး။ လက်ရှိ သူတို့အသက်မွေးအလုပ်က ကျန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။
တိုတိုပြောရရင် ရွာသားတွေကို ဖမ်းမနေပဲ သေနတ်အတု လုပ်နေမဲ့အစား တစ်ခြားပစ္စည်းလုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေပြပေးတယ် အစိုးရကိုယ်တိုင် အလုပ်အပ်လို့ရတာ အပ်ပေးတယ်..
ဖားကန့် နွံနစ်သေဆုံးရသူတွေအကြောင်းနဲ့ ယှဉ်တွဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်..
ခုနေတယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ဖားကန့်မှာ ရေမဆေးသွားလုပ်ပါလားပြောရင် ကျွန်တော် လုပ်မည်မဟုတ်
တကယ်တော့ ယခုသေဆုံးကြသူတွေဟာ ကျောက်ခိုးတူးသည်တော့မဟုတ် စွန့်ပစ်မြေစာတွေထဲက အဖိုးတန် ကျောက်ရှာသူတွေဖြစ်တယ် တစ်နိုင်ငံလုံးက လာကြတယ်၊ စွန့်ပစ်မြေစာထဲက ရေမဆေး ကျောက်ရှာခြင်းဟာ တရားဝင်- မဝင် ကျွန်တော် အတော်စဉ်းစားနေမိတယ်။
အသုံးမဝင်လို့ စွန့်ပစ်ပေမဲ့ အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် ပြဿနာမဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့လား..
သူတို့အသက်မွေးပုံက အန္တရာယ်များလွန်းလို့ တားဆီးခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ်ရှိပြီး မလိုက်နာနိုင်ကြ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆီက သေနတ်လုတဲ့ သတင်းတောင် တွေ့ဖူးတယ်။
ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဖားကန့်နယ်မြေဟာ ဦးပိုင်+သူပုန်+အုပ်ချုပ်ရေးတို့ဟာ ဒီနေရာမှာ စည်းလုံးညီညွတ်နေပြီး သေမထူး နေမထူးဖြစ်လာနေသူတွေဘဝကို စာနာမှု့မရှိ စီမံခန့်ခွဲပေးခဲ့ခြင်း ဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ပါ။
သေဆုံးသူတွေအပေါ် ယခုအစိုးရအမြင်နဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံဟာ မြေပြိုကျလို့ သေရသူချင်းအတူတူ မလတ်တောင် ဖြစ်စဉ်နဲ့ တခြားစီဖြစ်နေကြောင်း စိတ်ပျက်ဖွယ်တွေ့ရတယ်။
ဆိုတော့ကာနိုင်ငံရေး တိုက်ကွက် ဖြစ်သွားတယ်။ ဖောင်းထုစရာ ဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်အသက်မွေးအလုပ်မှာ လောဘကင်းတာများ ရှိလို့လားဗျာ တရားသဘောနဲ့ ယှဉ်ပြောတာပါ။
အမေရိကန်သမ္မတကြီးနဲ့ တရုတ်သမ္မတကြီးတို့ တယ်လီဖုန်းပြောဆိုကြစဉ် အမှတ်မထင် အမေရိကန်သမ္မတက မေးတယ် “ သမ္မတကြီးခင်ဗျား … သမ္မတကြီးမှာ နေ့စဉ် စားလဲ ဒီစိတ်.. သွားလဲ ဒီစိတ် ဆိုသလို အမြဲ စွဲထင်နေရတဲ့ ပြဿနာများ ရှိပါသလား “ .. တဲ့
တရုတ်သမ္မတ “ … အင်း .. ရှိပါတယ်၊ နှစ်စဉ် အရွယ်ရောက်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဝင်ရောက်လာမည့် လူငယ် ( ၁၂ – သန်း ထင်ပါရဲ့ ) တွေအတွက် အလုပ်အကိုင် ဘယ်လို ဖန်တီးပေးရမလဲ ဆိုတာ ပါပဲ “ တဲ့
မျောက်တွေဆို နို့စို့အရွယ်မျောက်လေးတွေဟာ မြေပေါ်က ကျောက်ခဲလို အတုံးအခဲလေးတွေ ကောက်စားတတ်တယ်။
ဆိုတော့ကာ အမေမျောက်မကြီးဟာ တချိန်လုံးကြည့်နေရတယ် မျောက်ကလေးအမြီး ဆွဲထားရတယ် ကောက်စားတာတွေ့ရင် ကလော်ထုတ်ပေးကြရတယ်..
တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်အစာရှာနေကြခြင်းဟာ ဝမ်းရေးအတွက်ဖြစ်တယ်။
အရင်းအနှီးရှိသူကတမျိုး မရှိသူက တစ်မျိုးဖြစ်နေခြင်းသာကွာတယ်။
အရင်းအနှီးမရှိလို့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖြစ်နေကြသူ ကျား-မ အရွယ်ကောင်း သန်းချီ ရှိနေတယ်။ ဒါတွေဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ကာကွယ်ရေး- လုံခြုံရေးကို စဉ်းစားကြည့်ရင်တောင် အတော် ကြောက်စရာကောင်းတယ်။
ဖားကန့်မြေစာပုံ ပြိုကျလို့သေဆုံးကြရသူတွေဟာ လောဘကြောင့် လို့ မှတ်ချက် ပေးတာ ကြားရတော့
အင်း…. မျောက်မကြီးလောက်တောင် တာဝန်မကြေဘူးလို့သာ မြင်ပါတယ်
One Reply to “ဖားကန့်မြေစာပုံ ပြိုကျလို့သေဆုံးကြရသူတွေဟာ လောဘကြောင့် လို့ မှတ်ချက်ပေးတာ ကြားရတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်များက ထိုင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ သွား သတိရတယ်။”
vimax viagra nakbeams https://acialisd.com/# – generic cialis from india guefsked Vardenafil Warnings illigeviange Cialis gabrizaerori Fish Flex Forte 500 Mg Cephalexin
Previous Previous post: လူနာသေဆုံးအရေအတွက် လျှော့ကျရေး မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက် ငှက်ဖျားနှင့် အိပ်ချ်အိုင်ဗွီဆေးဝါးတို့ကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသဆေးအဖြစ်မှ WHO ပယ်ဖျက်။ မည်သည့်အချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးအသင့်ဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းခြင်းသည် ပညာမဲ့ရာရောက်ဟု WHO ပြော
Next Next post: တရုတ်နှင့် လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ကြစဉ် အိန္ဒိယစစ်သားများမှာ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ဝိုင်းရံထားခံရဟု ဆို ။ လူ ၄၀- သေဆုံးသည်ဆိုခြင်းကို တရုတ်ငြင်းပယ်။ လာဒက်၌ နှစ်ဖက်တပ်များ ၁ မိုင်ကျော်ခန့်စီ ဆုတ်ခွာပေးကြသော်လည်း အိန္ဒိယအရှေ့ဖျား ဆစ်ကင်းပြည်နယ်၌လည်း နှစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လုံးထွေးသတ်ပုတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းပေါ်ထွက်